परदेशी भूमीबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका हाकिमलाई चिट्ठी – Himalitimes
परदेशबाट झोलाभरी सामान बरियाेले बाँधेर ल्याउने हाम्रो रहर हैन, महोदय बाध्यता हो । दुईथान छुङ्गो मोबाइल, दुई बोतल रक्सी, केहि नयाँ पुराना लुगा, २२इन्चको टिभि र घरपरिवार साथीभाइलाई ल्याइदिएको उपहारले हामीले परदेशमा आर्जेको सम्पत्तिको धाक लाउन खोजेका हैनौं, कोशेली, माया, आत्मीयता, सद्भाव र प्रेम दर्शाउन खोजेका हौँ। हामी जाबोसँग धाक लाउन सक्ने त्यत्रो क्षमता कहाँ हुन्छ? जो आफू स्वयं आफू रहेका हुँदैनौ।
तर सत्यता के हो भने सिङ्गो देश हामीले परदेशमा बगाएको पसिनामा बगीरगेको छ। हामी जाबोले ल्याउने दुईचार हजारका सामानलाई भन्सारमा रोक्दा, कडाइ गर्दा ३३ केजी सुन तस्करी, रक्तचन्दन, दुर्लभ वन्यजन्तुको चोरी शिकारी गर्ने र हात्ती छिराउनेहरु कानुनको दायरामा आउँछन भने होस् महोदय हामी नाङ्गै आउँला। एकसरो जिउमा धागो, एक रत्ती सुन, एक टिभी हत्केलामा नझुन्ड्याइकन आफ्नै देशबाट लगाएर गएका जुत्ताले आफ्नो पबित्र भुमिमा पाईला टेकौँला। आफ्नो कर्मभुमिको चिनो, सम्झना, उपहार ल्याउनु गलत हो भने भैगो हामीलाई ल्याउनु छैन।
यदि हामीले कर्मभूमिबाट ल्याउनु गलत हो भने हप्ता-दश दिनका लागि विदेश भ्रमणमा जाने चोर, दलाल, निकम्मा, भिभिआईपी भन्नेहरु हामीलाई लुट्दै घडी, चस्मा, जुत्ता, अन्डरवयर, मोबाइल, दारु अनि घरमा रहेकी आफ्नी स्वास्नीका लागि ब्रा र छोराछोरीका लागी खेलौना समेत किन्न लगाउँछन् र ल्याउँछन्। राष्ट्रको ढुकुटी र हामीलाई समेत रित्याउने यी महामानवहरुले ल्याएको यत्तिका सामान जफत हुन्छ कि हुदैन? के हुन्थ्यो होला र? सानालाई ऐन, ठुलालाई चयन त हो । ठिक छ लोकतन्त्र भनेकै यहि रहेछ। हामी बबुरालाई के थाहा ।
३३ केजी सुन छिरेको नदेख्ने महोदयहरुले मेरो एक केजी घ्यू, अचार, दालमोट, टिभी, क्यामरा, मह र फाटेका लुगा देखे। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हात्ती छिराउन सकिन्छ भन्दै हिड्ने महाराजहरु अझैं देशमा जिउँदै छन्। कत्ति त छिराए पनि होलान्। यस्तोसम्म न सरकारले देख्यो न सरोकारवालाले। तर अहिले हाम्रो फाटापुराना मालसामान खोसेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थालमा लिलाम गरेको देख्दा ती हात्ती छिराउनेहरुले सरकार र सरोकारवालालाई कुरिकुरी गर्दा हुन्। निकम्मा सरकार मजदुरवर्ग माथिको दादागिरीलाई नयाँ युग ठान्छ। आफ्नो धोती खुस्किएको थाहा छैन।
देश फर्किंदा पसिनाको अत्तर छर्केर ल्याएको सामान सरकारले भन्सार कडाइको नाटक गरेर आँखा लाउँछ। हामीले कसैलाई लुटेर, खोसेर र च्यातेर ल्याएका हैनौं। दिनरात गरेको मेहनत, रगत, पसिना, तिर्खा, भोक, प्यास, दुखकष्ट सब सहेर आर्जिएका हौँ। तसर्थ सरकार के कुरा हेक्का रहोस् भने तैंले लिलाम गर्दैमा हाम्रा भौतिक वस्तु त लिलाम होलान् । तर ती वस्तुमा हाम्रा पसिनाको गन्ध आइरहनेछ।जसलाई राज्यकोषले पचाउन सक्नेछैन। यति सामान आर्जिन हामी पलपल मरेर बाँचेका हुन्छौं। त्यसमा हाम्रा बाआमाकाे आशिर्वाद, प्यारीकाे प्रेम, छोराछोरीकाे सम्झना, साथीभाइको आत्मियता छ। यत्ती मात्रै हैन राष्ट्र र राष्ट्रियता पनि यहि भित्र छ। त्यो जो कसैले कहिल्यै लिलाम गर्न सक्दैन।
हामी भित्र पिडाको मुस्लो, दुखको महासागर, मायाको भोक, प्यासको ज्वालामुखी छ। जे छ सबै सहेर बसेका छौं, सकेजत्ति बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म देशलाई नाफा हुने काम गरेका छौँ। तर महोदयको यो हर्कतले असह्य भएपछि कोलाहल गर्नु परेको हो। जस्ले हाम्रो सन्तुष्टिको स्वास हराएको छ। हामी जिउँदा लास भयौं । अन्यथा हामी आजसम्म चुपचाप बसेका, सुतेका, निदाएका थियौं। परदेशमा कति अपाङ्ग भए, केहिले मानसिकता गुमाए, कत्ति दाजुभाइ आज पनि विभिन्न देशमा जेलभित्र छन्। कत्ति त झोलाभरी सपना बोकेर जानेहरू बाकसमा देश फिरे । खै महोदय हाम्रा लागि यहाँ सरकार देखिएको? कि सरकार भन्सारमा, गरिबीमा, निमुखाहरुमा, शोषण र दमन गर्न मिल्ने ठाउँमा मात्रै छ?
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, माघ २५, २०७५ 6:14:12 PM |
Prev१०६ यात्रु बाेकेकाे निगमकाे जहाज दिल्ली पुगेर फिर्ता,खराब मौसमका कारण अवतरण हुन सकेन
Nextदश वर्षे जनयुद्धभन्दा ठुलो मुलुकले धान्न नसक्ने आन्दोलन हुने प्रचण्डको चेतावनी